Amafasitela avela phansi kuya ophahleni / ubhavu wokugeza / uMfula iKeguan / amamitha angama-400 ukusuka osebeni loMfula i-Songhua / amamitha angama-200 ukusuka eZhuozhan / imizuzu emi-5 ngemoto ukuya kuCentral Street / ukuma oku-1 ukuya e-Sun Island
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-佳
1. Izakhiwo zemvelo yangaphakathi: Indawo ethengiswayo ethengelwe ngokukhethekile ukusebenza kwezindawo zokuhlala, kusukela endaweni embi, wonke amakhona aklanywe yimina mathupha, futhi yonke into ikhethwe yimi.
Impahla yasendlini enegama lomkhiqizo, impahla yenhlanzeko: Ihitha yamanzi i-Haier, umshini wokuwasha we-Panasonic, i-Haier hood, i-Supor cooker, i-Hengjie sanitary ware, ishawa ye-Wrigley, i-air conditioner ye-Midea, umatilasi we-Crouching Tiger.Ayigcini ngokubukeka iphezulu, kodwa isezingeni eliphezulu.
2. Indawo ezungezile: Itholakala endaweni yabacebile yase-Harbin, umphakathi wase-Aijian ovuthiwe, kunezindawo zokudlela, izitolo ezinkulu, izibhedlela namakhemisi ezansi.
Hamba amamitha angu-200 ukuya enxanxatheleni yezitolo ephezulu eHarbin: Zhuozhan.
Hamba amamitha angu-500 ukuze ufike osebeni lomfula i-Songhua.
Ngezansi kukhona isikhumulo sebhasi esinqamula eningizimu nasenyakatho yoMfula iYangtze.
Phuma futhi ujike ngakwesokudla ebhulohweni lomgwaqo omkhulu, eliholela ngqo emhlabeni weqhwa neqhwa kanye ne-Sun Island;
Hamba uye eningizimu uye ku-Central Avenue kanye nosebe lomfula i-Songhua.
Ngingumuntu othanda ukuphelela futhi nginenkimbinkimbi yobuhle. Zonke izindawo zami zokuhlala zakhiwe ngezindawo zami. Ngenxa yokuthi ngithanda umhlobiso wangaphakathi, ngithenge le sethi futhi ngasebenzisa indawo yokuhlala. Kusukela kokubi, wonke amakhona aklanywe yimi, futhi yonke into ikhethwe yimi uqobo. Imihlobiso yokhuni yonke eyethusi neqinile, imininingwane eminingi ehlanganisa izakhi zesiRashiya, izinto zasendlini ezinophawu nendawo yokugezela, ukukhanya okuhle nezibuko, obhavu onamanzi namanzi okugeza kwangempela, nezipikha zikaMarshall ezinekhwalithi yomsindo engavamile. Umsebenzi wami wobuciko, ngingathanda ukwabelana ngawo nabantu abanokunambitheka okufanayo, kube yikhaya lakho phakathi nohambo lwakho, futhi ngikuvumele uhambe njengendawo yasendaweni.
5.0 ·54 okushiwo abanye
Itholakala esifundeni esicebile saseHarbin, umphakathi wase-Aijian ovuthiwe, kunezindawo zokudlela, izitolo ezinkulu, izibhedlela namakhemisi phansi.
Umphakathi ovalelwe ngokugcwele, ukuphathwa kokulawulwa kokufinyelela, uhlelo lokuvikela impahla lwamahora angama-24.
Ukuhamba ngamamitha angu-200 kuyinxanxathela yezitolo ephezulu eHarbin: Zhuozhan.
Phuma futhi ujike kwesokudla ebhulohweni lomgwaqo omkhulu, eliholela ngqo emhlabeni weqhwa neqhwa kanye ne-Sun Island;
Hamba uye eningizimu uye ku-Central Street kanye nosebe lomfula i-Songhua.
1. Ukuzishayela wena ngokwakho: Kunezindawo zokupaka mahhala emphakathini. Ngokuphambene nomphakathi (ngaphesheya kwe-Aijian Road) indawo yokupaka ekhokhelwayo.
2. Ibhasi: Esitezi esingezansi kukhona isikhumulo sebhasi esidlula e-Harbin Jiangnan Jiangbei.
3. Umzila ongaphansi komhlaba: Eduze nesiteshi somgwaqo i-Youyi, isiteshi esikhulu sokudlulisa sase-Harbin (Isitimela saseHarbin siyakhiwa).
4. Hamba amamitha 500 ekhunjini Songhua River, 200 amamitha ukuba Zhuozhan, imizuzu engu-15 Central Street, imizuzu engu-10 kuya Harbin Isiteshi sesitimela (ukuqala Imali), imizuzu engu-20 kuya Harbin West Isiteshi sesitimela, imizuzu 40 ngemoto usuka Harbin Airport, 10 imizuzu ukushayela ukusuka Ice and Snow World kanye Sun Island.
Inqubo yokungena kanye nomhlahlandlela wokusetshenziswa kwendlu ubanzi futhi unemininingwane
Uma unemibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nami futhi uyibuyekeze uma usuyibona
Ungangifonela esimweni esiphuthumayo
Njengoba ngisebenza njalo, ngidinga nokuphumula ngesikhathi ebusuku
Ngakho-ke ngicela ungixolele uma isikhathi sokusebenza singekho imizuzwana
Ngivame ukuphumula ngemva kwehora leshumi ebusuku, ngicela ningixolele ngokungaphenduli ngesikhathi
Uma unemibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nami futhi uyibuyekeze uma usuyibon…
U佳 Ungumbungazi ovelele
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$47.